Etu ị ga-esi nweta ebook n'efu na Caliber anyị Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ eji akwụ ụgwọ na Caliber anyị
N’ọnwa ole na ole gara aga E mepụtara Caliber ọtụtụ, ruo n'ókè nke ịnye njikọ ọhụrụ na ọrụ iji melite ojiji nke eReader anyị na ọrụ ọhụrụ na karịa ihe niile, ọgụgụ ọhụrụ.
A na-emelite njikwa ebook a ruo n'ókè nke na nsụgharị ndị ọhụrụ tinye ohere inweta akwukwo n'efu na-enweghị ịdenye aha ebe ọ bụla ma ọ bụ na-ahapụghị mmemme anyị. Ihe bara uru maka ọtụtụ ndị ọrụ, ị naghị eche?
Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ eji akwụ ụgwọ maka Caliber
Mbụ anyị ga-emeghe Caliber anyị wee pịa n'ihu ihuenyo pịa nhọrọ «nweta Akwụkwọ » (akara ngosi nke dị ka ụwa), taabụ nke ọtụtụ n'ime gị jiriworị. Mgbe ịpị taabụ anyị họọrọ «Chọọ akwụkwọ elektrọnik» na ndị na-esonụ na ihuenyo ga-apụta:
Na enyo a, anyị nwere ike ịhọrọ aha akwụkwọ ma ọ bụ ebook nke anyị chọrọ ịchọ wee pịa “ọchụchọ” nke ga-egosi akwụkwọ ntanetị niile nwere aha ahụ ọ hụrụ.
N'akụkụ aka ekpe (aka ekpe anyị) anyị ga-ahụ ndepụta ụlọ ahịa ebe Caliber ga-achọ ebookỌ bụrụ na anyị chọrọ utu aha nke otu asụsụ, naanị anyị ga-ahọrọ ụlọ ahịa ma ọ bụ nchekwa ebe anyị ga-ahụ ha.
Isi okwu dị mma mana nke a ga-eburu n'uche bụ eziokwu na ị na-achọ ma akwụkwọ ederede n'efu na akwụkwọ akwụ ụgwọ, na nke ikpeazụ, Caliber ga-emepe ibe weebụ site na ịzụta ụfọdụ akwụkwọ ntanetị. Mana imirikiti nsonaazụ ya ga-abụ akwụkwọ ntanetị n'efu, ebook na mgbe ịpịrị ga-agbakwunye na mmemme anyị ka ị nwee ike ịgbanwe gaa eReader n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọzọkwa, nsonaazụ mbụ ga-abụ ebook n'efu ma ọ bụ ndị nwere ọnụahịa dị ala, ihe bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgụ ebook n'efu ma ọ bụ na ọnụ ala dị ala. N'ọnọdụ ọ bụla, dịka ị pụrụ ịhụ, sistemụ iji nweta ebook n'efu maka eReaders anyị dị mfe Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » software » caliber » Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ eji akwụ ụgwọ na Caliber anyị
A ahụhụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke peeji peeji na eBooks na Kindle Unlimited
Amazon na-ewepụ ụgwọ mbupu na nzụta akwụkwọ karịrị euro 19